I-China L-Phenylalanine CAS 63-91-2 yeeFarma Grade (USP) abavelisi kunye nabathengisi | Ndiyabulela
Igama lemveliso:: L-Phenylalanine
I-L-Phenylalanine (Isifinyezo sePhe) yi-amino acid ebalulekileyo kwaye kuphela kwendlela ye-phenylalanine efumaneka kwiiproteni. Inye ye-18 yee-amino acid eziqhelekileyo, kunye nenye yee-amino acid ezisibhozo emzimbeni womntu.
Njengokongezwa kwesondlo, i-L-phenylalanine inokujongwa njengeqela le-benzyl endaweni yeqela le-methyl ye-alanine, okanye iqela le-phenyl endaweni yesiphelo se-hydrogen ye-alanine. Uninzi emzimbeni yi-phenylalanine hydroxylase catalysis oxidation kwi-tyrosine, kunye nokwenziwa nge-tyrosine ii-neurotransmitters ezibalulekileyo kunye neehormoni, zokuthatha inxaxheba emzimbeni womzimba weswekile kunye ne-fat metabolism.
L-phenylalanine yi-bioactive aromatic amino acid. Yi-amino acid eyimfuneko engenakho ukuzenzela ngokwakho ngabantu nakwizilwanyana. Kuyimfuneko ukuba umntu athathe i-2.2g L-phenylalanine yonke imihla. Njengenye yee-amino acid ezisibhozo eziyimfuneko emzimbeni womntu, ibisetyenziswa ngokubanzi kumayeza okuxuba kunye nokutya. Yinto ebalulekileyo yenaliti yeamino acid. Kwimveliso yokulungisa ukutya, i-L-phenylalanine inokongezwa kukutya okubhaka. Kwaye isondlo se-phenylalanine sinokuphuculwa kunye ne-amido-carboxylation kunye ne-glucide.
I-phenylalanine inokuphucula ukutya kunye nokugcina ii-amino acid ezifanelekileyo. Kwimizi-mveliso yamayeza, i-L-phenylalanine isetyenziswa njengophakathi kwezinye ii-amino anticancer pharmaceuticals ezinje nge-formylmerphalanum kunye nokunye. Esinye isicelo esibalulekileyo kukudibanisa i-aspartame kunye ne-L-aspartic acid.
L-phenylalanine yeyona nto iphambili ekrwada yokutya okuncomekayo-i-sweetener Aspartame (Aspartame). Njengenye yeeamino acid emzimbeni, i-L-phenylalanine isetyenziselwa ikakhulu utofelo-amino acid kunye neziyobisi zeamino acid kwishishini lamayeza.
Egqithileyo L-Leucine CAS 61-90-5 kwiBakala lokutya (AJI USP)
Okulandelayo: L-valine CAS 72-18-4 yeFama yeBanga (i-USP)
Ikhemesti yeBakala L-Leucine, L-Threonine Pharm kwiBakala, L-Threonine kwiBakala lokutya, Ukutya kwezilwanyana, I-L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine,